Galmudug: Xil-ka-qaadista oo sii socota, Carabey iyo Casir! • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Galmudug: Xil-ka-qaadista oo sii socota, Carabey iyo Casir!
Galmudug: Xil-ka-qaadista oo sii socota, Carabey iyo Casir!
Koox ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug oo uu shir guddoominayo Guddoomiye kuxigeenka kowaad ee Golahaasi ayaa sheegay inay xilkii ka xayuubiyeen Guddoomiyihii Baarlamaanka Cali Gacal Casir iyo Madaxweyne kuxigeenka Maxamed Xaashi Carabey.
Go’aankan ayaa daba socda xiisada ka taagan Galmudug, iyadoo horey koox kale oo xildhibaano ah sheegeen inay xilkii ka qaadeen Madaxweynaha maamulkaasi Xaaf.
Waxaa horey loogu fashilay dadaalo ay wadeen koox Xildhibaano ka tirsan Federaalka oo Cadaado u yimid xalinta xiisadan salka ku heysa go’aankii Madaxweyne Xaaf ku taageeray xulafada Sacuudiga iyo Arrimaha Khaliijka.
Xildhibaanada Federaalka ee Muqdisho ka yimid ayaa qoraal ay soo saaren ku eedeeyey Madaxweyne kuxigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka inay iyagu diideen in wax wadahadal ah dhexmaro Madaxweyne Xaaf, iyagoo ku adkeystay in xilkii laga qaaday Xaaf.
Tilaabada ay ku dhaqaaqeen Xildhibaanada Taageersan Xaaf ayaa ah mid sida muuqata loogu jawaabayo Madaxweyne kuxigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka, oo iyagana hada la sheegay in xilka ka qaadis lagu sameeyey.
Xaaf ayaa ku eedeenaya Madaxda Sare ee dowlada Federaalka inay iyagu adeegsanayaan Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweyne kuxigeenka, isla markaana ay sii fogeeyeen xaalada, arrintaasi oo keentay in uu Xaaf isaguna xayiraad saaro dhamaan duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray Cadaado iyo Muqdisho.
Amusnaanta Madaxda Federaalka
Eedeynta Xaaf ayaa waxaa sii xoojiyey aamusnaanta Madaxda sare ee dowlada Federaalka oo la rumeysan yahay in si hoose ugu jiraan xiisada ka taagan Cadaado.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug iyo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ayaa sheegay inay weli xabsi guri ku jiraan oo ay ku xiran yihiin xarunta Madaxtooyada Cadaado oo ay wada degen yihiin sadex mas’uul ee maamulkaasi ugu sareysa.
Cali Gacal Casir Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in Xildhibaanada xilka isaga ka qaaday ay yihiin kuwo kooban balse lagu tiro badsaday dad shacab ah oo lagu soo aruuriyey hoolka shirarka ee Madaxtooyada.
Xildhibaano gaaraya 52 ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug iyo Madaxweyne kuxigeenka.